Mmechi nke "European Mobile Study of Motor and Retail Advertisers" | ECommerce ozi ọma
Mmechi nke "European Mobile Study of Motor and Retail Mgbasa Ozi"
Eva Maria Rodriguez | | eCommerce, Ahịa ahia, Azụmahịa
Na nso nso IAB UK, mgbasa ozi, ahia na nkwukọrịta nkwukọrịta dijitalụ na Spain, gosipụtara Ọmụmụ European Mobile nke Ndị Mgbasa Ozi Na Rlọ Ahịa rụrụ na mmekorita ya na IAB Europe yana mba IAB itoolu (Austria, Bulgaria, Ireland, Italy, Holland, Poland, Turkey na UK), nke ụdị 25 nwere nke kachasị eluụdịrị mkpọsa moto na akara 50 nwere nke kachasị elu ego mgbasa ozi na mkpọsa site na mba ọ bụla na-ekere òkè, na-agbakwunye ndị mgbasa ozi karịrị 600 nyochara.
Ebumnuche bụ isi nke ọmụmụ a bụ iji tụlee mgbanwe nke mobile azum nke ndị mgbasa ozi bụ isi na Europe ma gosipụta ọnọdụ dị na Spain na mba ndị ọzọ EU. Nkwubi okwu ya gụnyere na ụdị moto dị na Spain na-akụ nzọ na ngwa, ebe ndị na-ere ahịa na-eme ya na ntanetị weebụ. Ihe omuma ndi ozo bu na udiri na enye otutu oru na ihe nchoghari karie na ngwa, dika eCommerce ma obu nyocha ugbo ala, na Spain na-eduga n'iji usoro mgbasa ozi "peeji zuru ezu", okpukpu atọ nke nkezi Europe.
Ọmụmụ ihe ahụ na-ekpughe nkwubi okwu ndị a banyere mpaghara moto na ụlọ ahịa nke ndị mgbasa ozi Spanish, na-atụle ya na European nkezi na ndị ọzọ European IABs:
1 Mpaghara moto
2 Ngalaba ụlọ ahịa
Banyere ebe nrụọrụ weebụ moto, mpaghara a nọ n'ọnọdụ ikpeazụ n'ihe gbasara nkezi ndị Europe (78%), gbasara mmegharị na web ekwentị na 44%. Ndị mgbasa ozi Spanish na-agbadata n'okpuru European na-anabata weebụsaịtị na 52%, yana beingtali bụ mba nwere ụdị ndị kachasị elu (92%).
Banyere ọnọdụ nke ụlọ ahịa site na weebụ, Spain nọ n'ọnọdụ dị ala. Banyere arụmọrụ "akwụkwọ ịkwọ ụgbọala" site na weebụ, Spain dị n'elu na n'okpuru nkezi na weebụ mkpanaka yana PC ọsọ.
N'aka nke ọzọ, akụrụngwa akụrụngwa dị na Spain na-ebute ụzọ na mmepe ngwa, nke dị elu karịa nkezi Europe (68%), yana ndị mgbasa ozi sitere na mba ndị dị ka Austria na Italytali. Ọmụmụ ihe ahụ na-ekpughe na emere ọtụtụ ngwa iOS (100% nke ụdị ndị nyochara na Spain nwere ngwa maka ekwentị mkpanaaka na mbadamba) karịa gam akporo (84%) na mpaghara moto.
Banyere mgbasa ozi na mpaghara moto, Spain bụ ala nke Europe na ngosi mgbasa ozi maka arụmọrụ, naanị 4% ma e jiri ya tụnyere 16% nkezi na Europe, ebe ọ bụ na mbu na ngosipụta ngosi maka akara, yana 48% (naanị Italytali karịrị, 52%) ma e jiri ya tụnyere 25% nkezi na Europe. Na mgbakwunye, Spain bụ mba na-ejikarị ụdị "akwụkwọ zuru ezu" na Europe na 40% nke ojiji ma e jiri ya tụnyere 14% nkezi na Europe.
Ngalaba ụlọ ahịa
Spain bu uzo mbu nke Europe na ebe nrụọrụ weebụ ntaneti mobile tinyere United Kingdom na ntakịrị karịa nkezi naanị Netherlands, Poland na Italy karịrị na ntanetị na-anabata. Banyere ọnọdụ nke ụlọ ahịa na weebụ, Spain bụ onye ndu n'ihe metụtara mba ndị ọzọ dị na Europe nke nyochara na 92% (European nkezi bụ 64%) na webs na eCommerce 62%, naanị UK karịrị.
Banyere ngwa dị na mpaghara mkpọsa, Spain dị na nkezi ndị Europe na oke oke uto, ma na ngwa mkpanaka na mbadamba maka iOS na gam akporo. Otú ọ dị, Spain dị na ọdụ nke ngwa nwere eCommerce.
N'ihe banyere mgbasa ozi na mpaghara ụlọ ahịa, Spain bụ otu n'ime mba ndị na-ejighi ihe ngosi na mpaghara ụlọ ahịa arụmọrụ na 4% ma e jiri ya tụnyere European nkezi nke 9%, ma ọ bụ na European nkezi gbasara igosipụta brandig. Na ọmụmụ ihe Spain pụtara na ojiji nke 320 × 50 usoro ma na-eduga n'iji "peeji zuru ezu", okpukpu atọ na nkezi Europe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Mmechi nke "European Mobile Study of Motor and Retail Mgbasa Ozi"
Tudomus gosipụtara ụzọ ọhụrụ iji zụta na ire ụlọ
ValorTop, onye mbụ nwetara mmeri Lanzadera ya na onye mbido ụwa, gafere eleta 125.000 kwa ọnwa